I-Periscope Inventors uSir Howard Grubb noSimon Lake
USir Howard Grubb noSimon Lake
I-periscope iyisistim ebonakalayo sokuqhuba ukubonwa kwindawo efihliweyo okanye ekhuselekile. I-periscopes elula iqukethe izibuko kunye / okanye iifrime kwiziphelo eziphambene nesitsha sebheyi. Imihlaba ebonakaliswayo iyafana kunye kunye ne-45 ° ngekota kwi-axis ye-tube.
Periscopes kunye neMpi
Le ndlela ephambili ye-periscope, kunye nokongezwa kweelensi ezimbini ezilula, ezilungiselelwe ukujonga injongo kwiimfazwe ngexesha leMfazwe Yehlabathi I.
Abasebenzi baseMpi basebenzisa i-periscopes kwezinye izibhamu.
Iitanki zisebenzisa i-periscopes ngokubanzi: zivumela abasebenzi basezempi ukuba bahlole imeko yabo ngaphandle kokushiya ukhuseleko lwetanki. Uphuhliso olubalulekileyo, i-Gundlach yokujikeleza i-periscope, iquka intloko ejikelezayo, ivumela umlawuli wamatriki ukuba athole inkundla yeembono ezingama-360 ngaphandle kokuhamba esihlalweni sakhe. Olu luyilo, olugunyazwe nguRudolf Gundlach ngowe-1936, okokuqala lusetyenziswe kwiTanki ye-7-TP yamathuluzi okukhanya (avela ngo-1935 ukuya ku-1939).
I-Periscopes nayo yanceda amajoni ukuba abone ngaphezulu kweentsika, ngoko ke ukuphepha ukutshatyalaliswa komlilo onobutsha (ikakhulukazi kwi-snipers). Ngexesha leMfazwe Yehlabathi II, ababukeli beengqungquthela kunye namagosa asetyenziswa ngokuthe ngqo-ayenziwa nge-periscope binoculars kunye neentambo ezahlukeneyo.
Izinto eziyinkimbinkimbi ze-periscopes, usebenzisa i-prisms kunye / okanye i-fiber optics ehamba phambili esikhundleni sezibuko, kunye nokubonelela ngokuphakamisa, ukusebenza kwiimpawu zasemanzini nakwiindawo ezahlukeneyo zesayensi.
Ukuqulunqwa ngokubanzi kwe-martialine periscope ilula kakhulu: ezimbini iitelesiko zikhomba omnye komnye. Ukuba ii- telescopes ezimbini zineendlela ezahlukileyo zokukhulisa, ukuhluka phakathi kwazo kubangela ukuphakanyiswa okanye ukunciphisa.
USir Howard Grubb
I-Navy ibonisa ukuveliswa kwe-periscope (1902) kwiSimon Lake kunye nokuphelela kwe-periscope ku-Sir Howard Grubb.
Kuzo zonke izinto zayo ezintsha, i-USS Holland yayinebuncinane esisodwa; ukungabikho kombono xa kutyalwa. Inqanawa kwakufuneka iqukumbele phezu komhlaba ukwenzela ukuba abasebenzi bajonge ngeefestile kwinqaba yomgca. Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhawula iHolland enye yeenzuzo ezinqabileyo zamanqanawa-ukunyaniseka. Ukungabikho kombono xa kugxininiswa ekugqibeleni kwalungiswa xa iSimon Ichibi lisetyenziselwa iifrime kunye nama-lensi ukuphuhlisa i-omniscope, i-forensicope ye-periscope.
USirard Howard Grubb, umyili wezinto zokusebenza zeenkwenkwezi, wavelisa i-periscope yanamhlanje eyasetyenziswa kuqala kwi-Holland-eyenzelwe i-British Royal Navy submarines. Kwiminyaka engaphezu kwe-50, i-periscope yinkxaso-mboleko yonyana-moya kuphela eya kufakwa kumabonakude angaphantsi kwamanzi e- USS Nautilus .
UTomas Grubb (1800-1878) wasungula i-telescope-making firm in Dublin. Ubaba ka Sir Sirard Grubb waqatshelwa ngokuqulunqa nokwakha imishini yokuprinta. Ekuqaleni kwee-1830, wenza i-observatory ukuze asebenzise yena ene-telescope ye-9-intshi (23cm). Unyana omncinci kaThomas Grubb uWoward (1844-1931) wajoyina iqumrhu ngo-1865, phantsi kwesandla sakhe inkampani yafumana udumo lweetelesiko ze-Grubb zokuqala. Ngethuba leMfazwe Yehlabathi yokuqala, imfuno yayiseFrubb ekwenzeni i-grubbits and periscopes kwimigudu yemfazwe kwaye kwakuloo mizuzu iGrabb yafezekisa i-design periscope.
I-World Junior Hockey Championships 2006
Ukusebenza kweRust and Corrosion Work
Ilifa leMimoya yoMoya kunye noHlolo lokuHlola